Boqoradda Dalka Britain oo Warqadihii Aqoonsiga safiifnimo ka guddoontay dajiraha Somalia ee dalka Ingiriiska Sanbaloolshe |
Boqoradda Dalka Britain oo Warqadihii Aqoonsiga safiifnimo ka guddoontay dajiraha Somalia ee dalka Ingiriiska Sanbaloolshe
Khamiis, December 05, 2013 — Boqorada UK, Queen Elizabeth ayaa waraaqaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoontay danjiraha Soomaaliya ee UK, Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe), iyadoo danjiruhu uu noqonayo kii ugu horreeyay oo Soomaaliya ay u magacowdo dalka Britain 23-sano kaddib.
Munaasabad uu danjiraha waraaqihiisa aqoonsiga ugu gudbiyay boqoradda Britain ayaa ka dhacday aqalka boqortooyada Britain ee Buckingham Palace oo ku yaalla bartamaha magaalada xarunta ah ee London.
Danbjire Sanbalooshe oo la hadlay idaacadda VOA-da ayaa sheegay inuu aad ugu faraxay in laga gudoommo waraaqihiisa aqoonsiga danjirenimo, isagoo ballan-qaaday inuu sii xoojin doono xiriirka u dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Britain.
“Britain ayaa wxay ka mid tahay dalalka sida aadka ah u taageera dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana lagu xusuustaa shirarkii Soomaaliya loogu qabtay London ee uu soo qaban-qaabiyay ra’iisul wasaare David Cameron,” ayuu yiri danjire Sanbaloolshe.
Dalka Ingiriiska ayaa waxaa ku nool qubo-joog fara badan oo Soomaaliyeed, kuwaasoo gacan weyn ka geystay badbaadinta dalka muddooyinkii lagu soo jiray dagaallada sokeeye ee 22-sano ka badnaa.
Safaaradda Soomaaliya ee Britain oo dhawaan dib loo furay ayaa ahayd mid aan si wanaagsan u shaqeynayn 22-kii sano ee lasoo dhaafay, waxaana tani ay ka dhigan tahay in safaaradda Soomaaliya looga fadhiyo howlo aad u fara badan.
Ingiriiska ayaa waxay iyaguna dhankooda dhawaan safaarad ka furteen xarunta Soomaaliya ee Muqdisho, taasoo ahayd safaaraddii ugu horreysay oo dal reer galbeed ah uu ka furto Muqdisho in ka badan 22-sano.